[Ozi ọma] HNAC Maoming Binhai New Area Tap Water Investment Company Mmezi ọrụ Project ewepụtara nke ọma-News-HNAC Technology Co., Ltd.
[Ozi ọma] HNAC Maoming Binhai New Area Tap Water Investment Company Mmezi ọrụ ebidola n'ihu ọha.
Oge: 2020-12-18 Hits: 34
Maoming Binhai New Area Urban Investment and Development Co., Ltd., na onye ọrụ nkwekọrịta EPC n'ozuzu nke Maoming Project Department of China Railway Seventh Bureau Xi'an bụ kwadoro ma rụọ ọrụ ntinye mmiri nke Maoming Binhai New Area. HNAC nyere ngwa elektrọnịk niile, nyiwe sọftụwia na ọrụ nkwado akụrụngwa maka ọrụ a. Nke mebiri ndekọ nke oge owuwu kacha nso maka ọrụ ndị yiri ya.
[HNAC erutela nnukwu ihe ịga nke ọma] Guangdong Maoming Binhai New Area Water Plant Project mebiri ndekọ nke oge owuwu kacha nso maka ọrụ ndị yiri ya na Guangdong Province.
Ma ọ na-aga ọtụtụ puku kilomita na saịtị ọrụ ahụ n'oge ọrịa na-efe efe iji hụ na ọganihu nke ọrụ a na-aga n'ihu, ma ọ bụ na-ahazi usoro ezi uche nke onye ahịa iji mezue ọrụ inye mmiri n'oge usoro ihe owuwu, ọkachamara na mgbagwoju anya nke ndị ọrụ nkà na ụzụ HNAC nwere. meriri otuto otuto sitere n'aka ndị ahịa. N'ime oge ahụ, onye ahịa ahụ nyochara ọrụ ọgụgụ isi nke ụlọ ọrụ na ikike njikwa ọrụ nke ụlọ ọrụ, ghọtara nke ọma teknụzụ ụlọ ọrụ na ọkwa njikwa, wee bịanye aka na nkwekọrịta mmezi ọrụ iji mekwuo imekọ ihe ọnụ.
Dị ka njirimara na ọnụ ọgụgụ nke ọrụ ahụ si dị, ụlọ ọrụ ahụ hiwere HNAC Technology's Maoming Binhai New Area Tap Water Project Department, nke nwere ndị na-ahụ maka ọrụ, ndị injinia na-edozi ngwá ọrụ, na ndị injinia ọzụzụ nkà na ụzụ iji nye ọrụ nlekọta maka akụrụngwa ọrụ, na inye mmiri dị ọcha. n'ikwekọ n'ụkpụrụ ịdị mma nke ikuku na-eme kwa ụbọchị nke ọrụ nlekọta mmiri. N'otu oge ahụ, HNAC nyere ndị ọrụ dị mkpa nke onye nwe ọzụzụ ọzụzụ nkà na ụzụ, ma soro ndị ahịa rụọ ọrụ iji wuo Binhai New Area Water Plant ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ na-enye mmiri na-ahụ maka mmiri na Maoming.
N'ụtụtụ nke Disemba 14, mmemme mmeghe nke klas ọzụzụ teknụzụ iji kwalite ọkwa ọkachamara nke ndị ọrụ dị mkpa dị ka akụkụ nke ọrụ nlekọta ugbu a ka emere na Maoming Binhai New Area Water Investment Co., Ltd. "Ụlọ ọrụ ntinye ego mmiri"). Yang Houde, onye isi njikwa nke ụlọ ọrụ ntinye ego, Wu Xiaofang, onye osote onye isi njikwa nke ngalaba nwere ọgụgụ isi na nhazi nke HNAC, na Li Donglin, onye osote onye isi njikwa nke ngalaba nchekwa mmiri, gara ọrụ ahụ. Cai Tingting, onye isi ngalaba Integrated Management Department of Water Investment Corporation, duziri emume a.
Yang Houde, onye isi njikwa nke ụlọ ọrụ ntinye ego nke mmiri, mere ka ọ pụta ìhè na ụlọ ọrụ ntinye ego nke mmiri kwesịrị ịdabere na mkpa nke mmepe nke ụlọ ọrụ mmiri na mpaghara Binhai New, ma gbalịsie ike ịrụ ọrụ na ịrụ ọrụ mmiri dị elu. ikpo okwu na Binhai New Mpaghara. Ọ dị mkpa iji ọrụ nlekọta osisi mmiri nke HNAC na-enye dị ka ohere iji zụọ ọrụ osisi mmiri na nkà nchịkwa na ndị agha azụ iji nweta ọrụ onwe ha nke usoro mmiri na-enye mmiri, mmepụta nchebe na nlekọta nlekọta.
Dị ka onye ndú nke multi-energy IoT technology, HNAC kpebisiri ike ịbụ "anya na ụbụrụ ndị nwe", na-enye diversified na ahaziri klaasị mbụ ọgụgụ isi ọrụ na mmezi njikwa ọrụ, na ijikọ ọnụ dee a ọhụrụ isiakwụkwọ na mmiri na-azụ ahịa azụmahịa na. Mpaghara ọhụrụ Binhai.
Maoming Binhai New Area Water Supply Project (EPC) Ụlọ ọrụ mmiri a rụrụ ọhụrụ dị na nkwụsịtụ nke Maoming Port Avenue na 325 National Road na Binhai New Area. Ngụkọta mpaghara nnweta ala dị ihe dịka acres 109. Ngụkọta ọnụ ọgụgụ nhazi nke osisi mmiri bụ 100 puku m³ / d. Ọnụ ọgụgụ ihe owuwu nke ọrụ a bụ 50 puku m³ / d. Ọrụ ahụ na-eji usoro ọgụgụ isi nke mmiri mmiri MTC-3W iji chịkwaa usoro mmepụta dum, gụnyere ọtụtụ majors, gụnyere eletriki, igwe, na ọgwụgwọ mmiri. Arụ ọrụ, ọrụ, mmezi, mmejọ njikwa na mmezi nke akụrụngwa kwesịrị ka a kwadebere ya na ntozu ọkachamara yana ọtụtụ ndị ọrụ njikwa ọrụ nwere ọkwa agụmakwụkwọ dị elu, ọrụ na nrụzi. HNAC na-enye ọrụ nlekọta nwere ọgụgụ isi maka ụlọ ọrụ mmiri dị na Binhai New Area site na ọzụzụ nkà na ụzụ + na-edozi ngwá ọrụ iji hụ na arụ ọrụ nke ọma na nchekwa nke ngwá ọrụ na usoro.
Nke mbụ: [Retrograde, setịpụ ụgbọ mmiri] HNAC Nauru Smart Grid Project malitere nke ọma